AU calls for peaceful resolution of Zimbabwe post-election dispute – Ghana Online News
AU calls for peaceful resolution of Zimbabwe post-election dispute
ADDIS ABABA- The African Union (AU) has urged political actors in Zimbabwe to rise above their differences and work together to ensure peace, stability and development in their country.
The Chairperson of the AU Commission, MoussaFakiMahamat, has deeply regretted the unfortunate loss of lives in the immediate aftermath of the elections held on July 30 in Zimbabwe.
Zimbabwe’s incumbent leader EmmersonMnangagwa narrowly won the nation’s presidential election Friday as the ruling party also garnered a two-thirds majority in parliament in the first vote since the fall of long-time leader Robert Mugabe.
Mnangagwa was declared the winner in the poll marred by violence leading to loss of lives and injuries.
The Chairperson of the AU Commission reaffirmed his Commission’s commitment and support to the leaders and people of Zimbabwe, and wished them well in their endeavour to deepen democracy in their country, in line with the AU Charter on Democracy, Elections and Governance.
AU has deployed in Zimbabwe an election observation mission led by former Prime Minister HailemariamDesalegn of Ethiopia.